Zvirimwa zvinochenesa mhepo: mhando dzakanakisa | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 13/04/2022 12:00 | Imba yeGreen
Mhepo mudzimba dzedu nemunzvimbo dzebasa iri kuwedzera kuipa. Ndiwo mararamiro edu akonzera kuwanda kwenhamba yezvigadzirwa zvinogadzirwa nemakemikari mudzimba dzedu izvo zvinoburitsa huwandu hwehunyungudika organic komisheni inokuvadza hutano. Inonyanya kuitika ndeiyi: formaldehyde, trichlorethylene, benzene, xylene, toluene, carbon dioxide uye ammonia, mamwe acho ane prover carcinogenic effects. Kuti ugadzirise mamiriro ezvinhu aya, pane zvakasiyana zvinomera zvinochenesa mhepo.
Muchikamu chino tichakuudza kuti ndezvipi zvinomera zvikuru zvinochenesa mhepo uye kuti zvingakubatsira sei.
1 Zvakanakira zvinomera zvinochenesa mweya
2 zvinomera zvinochenesa mhepo
2.3 rurimi rwengwe
2.5 Musoro webhandi
2.6 yakasimba ficus
2.8 Hunde yeBrazil
2.9 Chirungu ivy
3 Bamboo muchindwe
Zvakanakira zvinomera zvinochenesa mweya
Zvirimwa zvine zvakawanda zvinobatsira mumba. Pamusoro pekuita seyakasikwa mweya fresheners mune dzimwe nguva, ivo zvakare vanoderedza ruzha, vanovandudza mafungiro uye vanochenesa zvakatipoteredza. Yeuka kuti panguva yephotosynthesis, zvinomera zvinotora carbon dioxide kubva mumhoteredzo ndokuishandura kuva oxygen, iyo inofanirwa pakufema kwevanhu.
Mamwe acho anobatsira kupfuura mamwe kana zvasvika pakuchenesa nharaunda nekusefa kunze zvinosvibisa. NASA yakaita ongororo yesainzi mukupera kwema1980, iyo NASA Yakachena Mhepo Chidzidzo, kuona kuti ndeapi ainyanya kushanda mune izvi. Vatsvakurudzi vakadaro runyoro rwezvinomera makumi maviri zvekuchenesa zvinonyanya kubatsira pakuchenesa mhepo munzvimbo dzakavharwa.
Munyori anotungamira wechidzidzo ichi, Bill Wolverton, inyanzvi yesainzi yekuAmerica inyanzvi muchemistry, microbiology, biochemistry, uye engineering yezvakatipoteredza. Akaona kuti zvishanu zvezvirimwa izvi zvaive zvakanakira kuwanikwa uye kushanda. Rondedzero yakatsanangurwa naWolverton munhau dzakasiyana ichiri kushanda uye inonakidza, zvirimwa izvi zvinogona kubvisa zvinhu zvinokuvadza kubva kumhepo zvakaita se formaldehyde, benzene, chili, carbon monoxide kana trichloroethyl.
Ndiyo imwe yezvinomera zvinonatsa uye imwe yeakareruka kuchengetedza. Kuisa chirimwa ichi mumusha medu kunoderedza kuparara kwemakemikari akaita se formaldehyde, xylene uye toluene. zvinokuvadza kuhutano, uye zvinoshandawo mukubvisa acetone, trichlorethylene uye benzene.
Inowanikwa kumasango anopisa eCentral neSouth America, inoda nzvimbo ine chiedza chisina kunanga, uye kunyangwe ichifarira hunyoro, haiwanzodiridzwa, uye imba yekugezera ine mwenje wechisikigo inzvimbo yakanaka yechirimwa ichi.
Imwe yemhando dzakanakisa dzekuchenesa mweya zvirimwa zvakajairika. Inozivikanwa kushandiswa kwemukati. Uyu muchindwe unoonekwa zviri nyore mukushongedza kweVictorian uye mumafirimu enguva. Chikonzero ndechekuti inogara nemufaro mumba pasina kudiwa kwezuva rakananga. Uyezve, pane kutarisirwa kushoma kunodiwa kuichengeta iri mumhando yepamusoro. Muti wemuchindwe uyu unowanikwa kuMadagascar. Asi nhasi yazara pasi rose. Las Palmas inyanzvi mukubvisa formaldehyde, benzene, uye carbon monoxide (zvikuru zvinobatsira kana mumwe munhu wepamba pako achiputa).
Inoshandiswa kutora nitrogen oxides uye formaldehyde. Ndiyo imwe yeakanyanya kurwisa maplants emumba aripo. Anozivikanwa seasingaparadzwi. Yakamira munzvimbo inopisa, yakaoma yekamuri, kupenya kwakadzika, kudiridza kusaregwa, makore pasina kudzorera, zvipembenene nezvirwere, chero chero chinhu.
Ndiyo iri nyore kuchengetedza. Iine mashizha egoridhe akaita semwoyo uye inozivikanwa muNorth America. Chirimwa chakasimba inogona kurarama muchiedza chakaderera uye tembiricha inotonhorera, zvichiita kuti ive yakanaka kumahofisi nedzimba sezvo ichiburitsa carbon monoxide uye formaldehyde mumhepo. Iyo yakasimba kwazvo uye inokura nekukurumidza. Pamba, inoda chiedza chakajeka chisina kunanga uye ivhu rakanyorova. Yakakwana yekugezera kana kicheni.
Inobvisa carbon monoxide nedzimwe chepfu uye tsvina. Ndiyo imwe yemiti mitatu yepamusoro yekubvisa formaldehyde kubva mumhepo. Zviri nyore kutarisira uye tembiricha yakakodzera, kudiridza uye chiedza, zvidyarwa zvako zvichararama kwemakore mazhinji.
Inoshivirira chiedza chakaderera uye kutonhora zvakanaka. Vanoshingirira kusanaya kwemvura uye havafe vakakanganwa kudiridza nekuti vanochengeta mvura mumidzi yavo.
Iyo inogara yakasvibira mhando yemhando yeFicus inozvarwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweIndia (Assam), kumaodzanyemba kweIndonesia (Sumatra neJava). Yakaunzwa kuEurope muna 1815 sechirimwa chemumba. Imwe yeakareruka kuchengetedza. Kuisa chirimwa ichi mumba medu kunoderedza formaldehyde, organic compound inoshanduka inokuvadza hutano.
Raphis excelsa chanza chine mupoto chiri nyore kuchengeta uye chisingade mwenje wakawanda. Raphis excelsa, inozivikanwawo seChinese yegoridhe yetsono uswa, Iine makumi emhando dzemhando dzine urefu hwemita imwe nehafu. Inoderedza formaldehyde uye benzene, volatile organic compounds inokuvadza hutano.
Zita rayo resainzi ndiDracaena uye ndeyemhuri yeagave. Inobva kutropical America uye inogara yakasvibira shrub. Iyo inoratidzirwa neyakajeka dzinde rebrown rine mhete dzakachinjika. Mashizha acho akarembera, akaita serenje, uye anomira pachena nokuda kweruvara rwawo rwakasvibira rwakajeka nemitsetse yeyero inofamba nepakati pawo.
Aya maruva anomera chete mumienzaniso yevakuru inosvika pahurefu (kazhinji mamita maviri) uye inomira kunze kwekunhuhwirira kwavo kunodhaka. Inoita kunge ichitumbuka zvisingaite uye inoderedza kusagadzikana kwemakemikari emakemikari akadai se trichlorethylene uye xylene, izvo zvinokuvadza kuhutano.
Icho chirimwa chakajairwa chinokwira chinogona kukwira mamita akati wandei pamusoro pevhu uye chinogona kukwira chero chero rudzi rwepamusoro, semiti, matombo, madziro. Kuunganidzwa kwemashizha uye madzinde kunogona kuitwa chero nguva yegore, kunyangwe zviri nani kuzviita usati watumbuka. Inoderedza kuparara kwemakemikari anokuvadza kuhutano, akadai se formaldehyde, trichlorethylene uye benzene. Uyu muzambiringa wakanyanya kuoma kukura, unofarira kutonhora uye hunyoro, uye unogona kuchengetwa muhari dziri pamhanza.
Inoshanda seyakasikwa humidifier. Chirimwa chinobva kuChina uye chakarimwa pasi rose. Parizvino inogona kushandiswa sechikamu chekushongedza kwedzimba, magadheni uye patio. Nekuda kwehunhu hwayo hwakasiyana, chirimwa chinoda kugadziridzwa kushoma.
Inobvisa benzene, formaldehyde uye trichlorethylene. Iyi simiti yakakurumbira yemumba inokura muchiedza chakaderera uye haidi kudiridza zvakanyanya, zvichiita kuti ive yakakwana kune avo vanowanzokanganwa kudiridza zvirimwa zvavo.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvezvinomera zvinochenesa mweya uye zvakanakira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » zvinomera zvinochenesa mhepo